GÓC GIẢM GIÁ - ALBUM 02: STEREO RECEIVER & AMPLY ONKYO Stereo receiver, network stereo receiver và amply2kênh nghe nhạc, những sản phẩm vượt thời gian, nhưng vẫn được giảm giá quá tốt đến 40% trong một chương trình không kéo dài. Một album được nhiều người đón chờ. ĐẶC BIỆT: Bắt đầu từ Album 02, TNG sẽ dành tặng từ 1 đến2sản phẩm với chiết khấu cao vượt bậc, nhằm tri ân khách hàng nhân dịp kỉ niệm 10 năm thành lập 2010-2020. Quý khách hãy nhanh tay để book những model xịn với giá siêu tốt này! • TX-8030 (màu đen): Stereo Network, giá sau giảm chỉ còn 6,773,000 VND. • TX-8050 (đen, bạc): Network Stereo Receiver, 11,127,000 VND. • TX-8130 (đen, bạc): Network Stereo Receiver, 10,385,000 VND. • TX-8150 (đen, bạc): Network Stereo Receiver, 12,075,000 VND. • TX-8220 (đen): Network Stereo Receiver, 7,952,000 VND. • TX-8250 (đen): Network Stereo Receiver, 13,685,000 VND. • TX-8270 (đen): Network Stereo Receiver, 14,739,000 VND. • TX-L20D (đen): Network Stereo Receiver, 13,239,600 VND. • A-9030 (đen, bạc): Integrated Stereo Amplifier, 7,224,000 VND. • A-9150 (đen, bạc): Integrated Stereo Amplifier, 13,156,000 VND. • A-9030 (đen, bạc): Integrated Stereo Amplifier, GIẢM GIÁ ĐẶC BIỆT 40%, CHỈ2SẢN PHẨM CHO2KHÁCH HÀNG ĐẦU TIÊN, giá còn 6,192,000 VND. Album 02 nằm trong seri GÓC GIẢM GIÁ thiết bị âm thanh giải trí từ TNG Audio, post tại FANPAGE lúc 10g sáng mỗi Thứ Tư và Sáu hàng tuần. Đón xem Album 03 – BỘ DÀN XEM PHIM vào Thứ Sáu tuần này 28.08.2020. Và đừng quên xem lại Album 01 – AV RECEIVER ĐA KÊNH đã lên sóng với những sản phẩm cuối cùng. Toàn bộ sản phẩm trong GÓC GIẢM GIÁ đều là hàng mới phân phối chính hãng. Giá giảm tới 50%. Số lượng có hạn. Xem giá và chi tiết sản phẩm trong từng hình. Đặt hàng tại comment hoặc inbox. #Onkyo #amply #stereo_receiver #Tng_audio #Tieng_ngoc_audio ~~~~~ Trong khuôn khổ Chương trình Kỷ niệm 10 năm Thành lập TNG Audio 2010-2020 TNG-Tiếng Ngọc Audio, Nhà phân phối chính thức - 198 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM - 0945 418 118 - www.tng.com.vn
TNG-Tiếng Ngọc Audio
GÓC GIẢM GIÁ ALBUM 01: AV RECEIVER ĐA KÊNH ONKYO (NHẬT) Onkyo là một trong những thương hiệu HiFi audio uy tín nhất không chỉ trong nước Nhật mà còn trên toàn cầu. Chất lượng ổn định, liên tục khám phá, luôn dẫn đầu về công nghệ. ~~~~~ Album 01 là một bộ sưu tập nhỏ các AV Receiver 5.1, 5.2, 7.2, 9.2 phục vụ xem phim, nghe nhạc xuất sắc cho dân chơi hàng chất ghiền âm thanh hay – hình ảnh đẹp. Giá giảm không thể hời hơn, như mua xuất xưởng tại cổng nhà máy. • TX-NR717 (màu đen): Network A/V Receiver 7.2 kênh, giá sau giảm 12,965,000 VND • TX-SR333 (đen): Home Cinema Receiver 5.1 kênh, 6,096,000 VND • TX-NR535 (đen): Network A/V Receiver 5.2 kênh, 9,106,000 VND • TX-NR636 (đen): Network A/V Receiver 7.2 kênh, 10,836,000 VND • TX-NR555 (đen): Network A/V Receiver 7.2 kênh, 10,185,000 VND • TX-NR474 (đen): Network A/V Receiver 5.1 kênh, 10,248,000 VND • TX-SR373 (đen): A/V Receiver 5.1 kênh, 8,040,000 VND • TX-RZ730 (đen): Network A/V Receiver 9.2 kênh, 18,884,000 VND • TX-RZ830 (đen): Network A/V Receiver 9.2 kênh, 24,764,000 VND • TX-L50 (đen, bạc): Network A/V Receiver 5.1 kênh, 14,184,000 VND ~~~~~ Album 01 – AV RECEIVER ĐA KÊNH nằm trong seri GÓC GIẢM GIÁ thiết bị âm thanh giải trí từ TNG Audio, post tại FANPAGE lúc 10g sáng mỗi Thứ Tư và Sáu hàng tuần. Đón xem Album 02 – RECEIVER2KÊNH vào Thứ Tư tuần sau 26.08.2020. Toàn bộ sản phẩm trong GÓC GIẢM GIÁ đều là hàng mới phân phối chính hãng. Giá giảm tới 50%. Số lượng có hạn. Xem giá và chi tiết sản phẩm trong từng hình. Đặt hàng tại comment hoặc inbox để biết thêm chi tiết. #onkyo #tiếng_ngọc_audio #bộ_dàn_xem_phim #tng_audio ~~~~~ Trong khuôn khổ Chương trình Kỷ niệm 10 năm Thành lập TNG Audio 2010-2020 TNG-Tiếng Ngọc Audio, Nhà phân phối chính thức - 198 Điện Biên Phủ, P7, Q3, TPHCM - 0945 418 118 - www.tng.com.vn
India's Leading Online Audio/Video Store – AVStore.in
╔═══════════════════════════╗ Super Sale ลดเพิ่ม 15% สูงสุด 5,000 บาท ╚═══════════════════════════╝ . โค้ดส่วนลดพิเศษ เฉพาะลูกค้าของ AV VALUE ลด3วันเท่านั้น! 28 ส.ค. - 30 ส.ค. 63 . ❗️สั่งซื้อได้ที่นี้ ที่เดียว nocnoc.com❗️ . กรอกโค้ด "AVAUG15" ลดเพิ่ม 15% สูงสุด 5,000 บาท . ลดกันไปเลย ทุกชิ้น! ไม่มีเงื่อนไข! ไม่มียอดขั้นต่ำ! . ผ่อน 0% สูงสุด 15 เดือน (ธนาคาร UOB และ TMRW) เมื่อมียอดคำสั่ง 10,000 บาท ขึ้นไป (หลังหักส่วนลดแล้ว) . ช้อปปิ้งกันได้เลยย >>> https://bit.ly/3aszDfV . สินค้าหมวด TV >>> https://bit.ly/2YGUiYX สินค้าหมวด Soundbar >>> https://bit.ly/3hz3tSU สินค้าหมวด AV Receiver และ Home Theater >>> https://bit.ly/2EGIf73 สินค้าหมวด ลำโพง Bluetooth >>> https://bit.ly/2D3QfOP สินค้าหมวด เครื่องปรับอากาศ >>> https://bit.ly/3b1vArg สินค้าหมวด ตู้เย็น >>> https://bit.ly/31Emqy5 สินค้าหมวด เครื่องซักผ้า >>> https://bit.ly/34GeAFU .
Zettabyte It Store Myanmar - Android TV Box & US Imports
အင်တာနက်သုံး ဂိမ်းဆော့ ဖုန်းတစ်လုံးလိုသုံးပြုနိုင်မည့် ၄၅၀ဝ၀ ကျပ်မှစတင်သည့် Android TV Box များ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ပစည်းရောက်ငွေချေစနစ်နဲ့ တန်ဖိုး ၁၅၀,၀၀၀ အောက် စက်အားလုံးကိုပို့ပေးပါတယ်ခင်ဗျ။ တချို့မရတဲ့မြို့တွေ၊ ၁၅၀၀၀၀ ကျော်တဲ့စက်တွေနဲ့ အမြန်လိုချင်လို့ ကားဂိတ်ကနေပို့စေချင်သူတွေကတော့ ငွေကြိုလွှဲပေးပြီး မှာနိုင်ပါတယ်။ ဖုန်းတစ်လုံးလို အသုံးပြုနိုင်မည့်အပြင် Playstore ပါဝင်ပြီး Zoom App သုံးကာ Online Meeting တွေလုပ်ဖို့၊ သင်ခန်းစာတွေ သင်ကြားဖို့၊ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်၊ အင်တာနက်သုံး၊ Youtube ကြည့်၊ ဂိမ်းတွေဆော့ဖို့၊ Media Box တစ်လုံးရှိယုံဖြင့် အားလုံးလုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။ ခေတ်မရှိတော့တဲ့ မှုန်ဝါးဝါးခွေတွေအစား ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်နဲ့ hard disk သို့မဟုတ် အင်တာနက် အသုံးပြုကာ အရည်အသွေးမြင့်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ဖို့ကိုလဲ Android TV Box လေးများက အပြည့်အဝဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Smart TV ရှိပြီးသားဖြစ်လျှင်တောင်မှ Application တွေထပ်ထည့်လို့မရတာ၊ တချို့ရုပ်ရှင်တွေအသံမထွက်တာ၊ မဖွင့်နိုင်တာတွေကို Android TV Box လေးတွေက လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Android OS ဖြစ်တဲ့အတွက် ဖုန်းတစ်လုံးလိုမျိုး Playstore ကနေ ကိုက်ညီတဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Application တွေ Game တွေ ထည့်သွင်းပြီးအသုံးပြုနိုင်ဦးမှာပါ။ AV နှင့် HDMI နှစ်မျိုးလုံးပါဝင်တဲ့အတွက် ဟိုးအရင် TV တွေကအစ အခုခေတ် TV တွေအဆုံး အားလုံးနဲ့ အဆင်ပြေပြေအသုံးပြုလို့ရနိုင်ပါတယ်။ Application တွေသုံး၊ ဂိမ်းတွေဆော့၊ အင်တာနက်ပေါ်က ရုပ်ရှင်တွေ၊ ရုပ်သံလိုင်းတွေ ကြည့်နိုင်ယုံသာမက ယနေ့ခေတ်ကြီးမှာ ကွာလတီမမှန် စျေးကြီးပြီး ထိန်းသိမ်းရခက်တဲ့ ခွေတွေအစား Zettabyte မှာရနိုင်တဲ့ စျေးနှုန်းသက်သာပြီး အရည်အသွေးမြင့် ဒေတာတွေကို ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Android TV Box လေးတွေက အပြည့်အဝကူညီပေးမှာပါ။ ရိုးရိုး LCD TV တွေမှာ Hard Disk တွေထိုးကြည့်တဲ့အခါ မဖတ်တာတွေ၊ ရုပ်မထွက် အသံမလာတာတွေကိုလဲ Android TV Box လေးတွေက ဖြေရှင်းပေးမှာပါ။ Smart TV နှင့် Blu-ray စက် အတော်များများ မဖတ်နိုင်တဲ့ နောက်ပိုင်းအသံစနစ်အမြင့်တွေဖြစ်တဲ့ DTS:X နှင့် Dolby Atmos လို အသံစနစ်တွေကိုလဲ Android TV Box လေးတွေခံလိုက်ယုံနဲ့ အသံမထွက်တဲ့ ပြသနာကို ပြေလည်သွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Blu-ray ကွာလတီအမြင့်ရုပ်ရှင်တွေကို အသံမထွက်မှာပူစရာမလို၊ စာတန်းထိုးဖိုင်တွေ မဖတ်မှာပူစရာမလို၊ ကွန်ပြူတာမလို၊ Smart TV မလိုပဲ Android TV Box လေးရှိယုံနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်တော့မှာပါ။ Media Box များဟာ ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်ဖို့ကို အထူးပြုထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် စာတန်းထိုး File မရွေး ဖော်ပြနိုင်မှုနှင့် Media Format အားလုံးနီးပါးကို Support လုပ်ပေးနိုင်မှု၊ Playstore ပါဝင်တဲ့အတွက် ကိုက်ညီတဲ့မည်သည့် android applicatoin ကိုမဆိုထည့်သွင်းနိုင်မှု အစရှိတဲ့ အားသာချက်တွေရှိပါတယ်။ Smart TV နှင့် 4K TV အများစုမှာ Hard Disk ကိုတိုက်ရိုက်ထိုးပြီး ရုပ်ရှင်တွေကြည့်နိုင်ပေမဲ့ လိုချင်တဲ့ Application တွေထပ်ထည့်မရတာတွေ၊ AV Receiver တွေကနေ 5.1 နှင့် 7.1 အသံပြန်ထုတ်ရခက်တာတွေ၊ မြန်မာလိုရေးလို့ ဖတ်လိုမရတာတွေ အစရှိတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလဲ ပြည်လည်စေမှာအသေအချာပါပဲ။ ယနေ့ခေတ်ကြီးမှာ ကွာလတီမမှန် စျေးကြီးပြီး ထိန်းသိမ်းရခက်တဲ့ ခွေတွေအစား Zettabyte မှာရနိုင်တဲ့ စျေးနှုန်းသက်သာပြီး အရည်အသွေးမြင့် ဒေတာတွေကို ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Android Box လေးတွေက အပြည့်အဝကူညီပေးမှာပါ Youtube, Netflix, iFlix အစရှိတဲ့ Application တွေကို TV ဖန်သာပြင်ပေါ်မှာ ကြည့်ရှုခံစားလိုပါသလား❓ Android Box လေးတစ်လုံးပိုင်ဆိုင်ယုံဖြင့် အထက်ပါအရာအားလုံးကို စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မှာပါ။ ယခုအချိန်မှာ Android Box တွေရောင်းချတဲ့ ဆိုင်တွေများလာပေမဲ့ တကယ်ကို သေသေချာချာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး ထဲထဲဝင်ဝင်နားလည်အောင် လေ့လာပြီးမှ အမျိုးစုံလှတဲ့ Box တွေထဲမှာမှ သုံးလို့အဆင်အပြေဆုံးဖြစ်တဲ့ Android Box တွေကိုမှ ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံကနေ တိုက်ရိုက်တင်သွင်းကာ မိမိတို့ကိုက်ညီတဲ့ ငွေကြေး၊ အသုံးဝင်လိုမှုတွေနဲ့ အရည်အသွေးတွေပေါ်မူတည်ပြီး စိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့ရအောင် ရောင်းချပေးနေသော Zettabyte Plus တွင်ဝယ်မှသာ စိတ်ချရမှာပါခင်ဗျ။ အခြားဘယ်နေရာမှာမှ မရရှိနိုင်သော ရွေးချယ်စရာ အစုံလင်ဆုံးနေရာဖြစ်ပြီး လက်လီ/လက်ကား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေကာ စိတ်ချရတဲ့ အာမခံမှု၊ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသောစက်ကို ညွှန်းပေးနိုင်မှု၊ နည်းပညာပိုင်းနှင့်ပါတ်သတ်ပြီး သေချာစွာရှင်းလင်းပြသပေးနိုင်မှုတွေကြောင့် Android TV Box ဝယ်မယ်ဆိုလျှင် Zettabyte Plus သို့သာကြွလှမ်းခဲ့ပါခင်ဗျ။ အစစအရာရာ အဆင်ပြေ စိတ်ချမ်းသာဖို့ အာမခံပါတယ်။ မဟာပရိုမိုးရှင်းအနေဖြင့် Android TV Box ဝယ်ယူသူတိုင်းအားလည်း ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရုပ်ရှင်လက်ဆောင် ၅၀၀၀ ဖိုးပေးသွားဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ တစ်သိန်းနှင့်အထက်စက်အားလုံး အာမခံ ၆ လပေးမည် ဖြစ်ပြီး တစ်သိန်းအောက်စက်အားလုံးကိုတော့ အာမခံ ၁ လပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ လက်ကားပြန်လည်ရောင်းချလိုသူများအတွက်လဲ ၅ လုံးမှစတင်ပြ
တီဗီအားလုံးကို Android Smart TV အဖြစ်ပြောင်းပေးမည့် စွယ်စုံသုံး Media Box များ မဟာပရိုမိုးရှင်း ဖုန်းတစ်လုံးလို အသုံးပြုနိုင်မည့်အပြင် Playstore ပါဝင်ပြီး Zoom App သုံးကာ Online Meeting တွေလုပ်ဖို့၊ သင်ခန်းစာတွေ သင်ကြားဖို့၊ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်၊ အင်တာနက်သုံး၊ Youtube ကြည့်၊ ဂိမ်းတွေဆော့ဖို့၊ Media Box တစ်လုံးရှိယုံဖြင့် အားလုံးလုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။ ခေတ်မရှိတော့တဲ့ မှုန်ဝါးဝါးခွေတွေအစား ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်နဲ့ hard disk သို့မဟုတ် အင်တာနက် အသုံးပြုကာ အရည်အသွေးမြင့်ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ဖို့ကိုလဲ Media Box လေးများက အပြည့်အဝဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Smart TV ရှိပြီးသားဖြစ်လျှင်တောင်မှ Application တွေထပ်ထည့်လို့မရတာ၊ တချို့ရုပ်ရှင်တွေအသံမထွက်တာ၊ မဖွင့်နိုင်တာတွေကို Media Box လေးတွေက လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Android OS ဖြစ်တဲ့အတွက် ဖုန်းတစ်လုံးလိုမျိုး Playstore ကနေ ကိုက်ညီတဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ Application တွေ Game တွေ ထည့်သွင်းပြီးအသုံးပြုနိုင်ဦးမှာပါ။ AV နှင့် HDMI နှစ်မျိုးလုံးပါဝင်တဲ့အတွက် ဟိုးအရင် TV တွေကအစ အခုခေတ် TV တွေအဆုံး အားလုံးနဲ့ အဆင်ပြေပြေအသုံးပြုလို့ရနိုင်ပါတယ်။ Application တွေသုံး၊ ဂိမ်းတွေဆော့၊ အင်တာနက်ပေါ်က ရုပ်ရှင်တွေ၊ ရုပ်သံလိုင်းတွေ ကြည့်နိုင်ယုံသာမက ယနေ့ခေတ်ကြီးမှာ ကွာလတီမမှန် စျေးကြီးပြီး ထိန်းသိမ်းရခက်တဲ့ ခွေတွေအစား Zettabyte မှာရနိုင်တဲ့ စျေးနှုန်းသက်သာပြီး အရည်အသွေးမြင့် ဒေတာတွေကို ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Android Box လေးတွေက အပြည့်အဝကူညီပေးမှာပါ။ ရိုးရိုး LCD TV တွေမှာ Hard Disk တွေထိုးကြည့်တဲ့အခါ မဖတ်တာတွေ၊ ရုပ်မထွက် အသံမလာတာတွေကိုလဲ Android Box လေးတွေက ဖြေရှင်းပေးမှာပါ။ Smart TV နှင့် Blu-ray စက် အတော်များများ မဖတ်နိုင်တဲ့ နောက်ပိုင်းအသံစနစ်အမြင့်တွေဖြစ်တဲ့ DTS:X နှင့် Dolby Atmos လို အသံစနစ်တွေကိုလဲ Android Box လေးတွေခံလိုက်ယုံနဲ့ အသံမထွက်တဲ့ ပြသနာကို ပြေလည်သွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Blu-ray ကွာလတီအမြင့်ရုပ်ရှင်တွေကို အသံမထွက်မှာပူစရာမလို၊ စာတန်းထိုးဖိုင်တွေ မဖတ်မှာပူစရာမလို၊ ကွန်ပြူတာမလို၊ Smart TV မလိုပဲ Media Box လေးရှိယုံနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်တော့မှာပါ။ Media Box များဟာ ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်ဖို့ကို အထူးပြုထုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် စာတန်းထိုး File မရွေး ဖော်ပြနိုင်မှုနှင့် Media Format အားလုံးနီးပါးကို Support လုပ်ပေးနိုင်မှု၊ Playstore ပါဝင်တဲ့အတွက် ကိုက်ညီတဲ့မည်သည့် android applicatoin ကိုမဆိုထည့်သွင်းနိုင်မှု အစရှိတဲ့ အားသာချက်တွေရှိပါတယ်။ Smart TV နှင့် 4K TV အများစုမှာ Hard Disk ကိုတိုက်ရိုက်ထိုးပြီး ရုပ်ရှင်တွေကြည့်နိုင်ပေမဲ့ လိုချင်တဲ့ Application တွေထပ်ထည့်မရတာတွေ၊ AV Receiver တွေကနေ 5.1 နှင့် 7.1 အသံပြန်ထုတ်ရခက်တာတွေ၊ မြန်မာလိုရေးလို့ ဖတ်လိုမရတာတွေ အစရှိတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလဲ ပြည်လည်စေမှာအသေအချာပါပဲ။ ယနေ့ခေတ်ကြီးမှာ ကွာလတီမမှန် စျေးကြီးပြီး ထိန်းသိမ်းရခက်တဲ့ ခွေတွေအစား Zettabyte မှာရနိုင်တဲ့ စျေးနှုန်းသက်သာပြီး အရည်အသွေးမြင့် ဒေတာတွေကို ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Android Box လေးတွေက အပြည့်အဝကူညီပေးမှာပါ Youtube, Netflix, iFlix အစရှိတဲ့ Application တွေကို TV ဖန်သာပြင်ပေါ်မှာ ကြည့်ရှုခံစားလိုပါသလား❓ Android Box လေးတစ်လုံးပိုင်ဆိုင်ယုံဖြင့် အထက်ပါအရာအားလုံးကို စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မှာပါ။ ယခုအချိန်မှာ Android Box တွေရောင်းချတဲ့ ဆိုင်တွေများလာပေမဲ့ တကယ်ကို သေသေချာချာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး ထဲထဲဝင်ဝင်နားလည်အောင် လေ့လာပြီးမှ အမျိုးစုံလှတဲ့ Box တွေထဲမှာမှ သုံးလို့အဆင်အပြေဆုံးဖြစ်တဲ့ Android Box တွေကိုမှ ထုတ်လုပ်တဲ့စက်ရုံကနေ တိုက်ရိုက်တင်သွင်းကာ မိမိတို့ကိုက်ညီတဲ့ ငွေကြေး၊ အသုံးဝင်လိုမှုတွေနဲ့ အရည်အသွေးတွေပေါ်မူတည်ပြီး စိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်ဝယ်ယူလို့ရအောင် ရောင်းချပေးနေသော Zettabyte Plus တွင်ဝယ်မှသာ စိတ်ချရမှာပါခင်ဗျ။ အခြားဘယ်နေရာမှာမှ မရရှိနိုင်သော ရွေးချယ်စရာ အစုံလင်ဆုံးနေရာဖြစ်ပြီး လက်လီ/လက်ကား ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေကာ စိတ်ချရတဲ့ အာမခံမှု၊ လိုအပ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသောစက်ကို ညွှန်းပေးနိုင်မှု၊ နည်းပညာပိုင်းနှင့်ပါတ်သတ်ပြီး သေချာစွာရှင်းလင်းပြသပေးနိုင်မှုတွေကြောင့် Android TV Box ဝယ်မယ်ဆိုလျှင် Zettabyte Plus သို့သာကြွလှမ်းခဲ့ပါခင်ဗျ။ အစစအရာရာ အဆင်ပြေ စိတ်ချမ်းသာဖို့ အာမခံပါတယ်။ မဟာပရိုမိုးရှင်းအနေဖြင့် Android TV Box ဝယ်ယူသူတိုင်းအားလည်း ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရုပ်ရှင်လက်ဆောင် ၅၀၀၀ ဖိုးပေးသွားဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ တစ်သိန်းနှင့်အထက်စက်အားလုံး အာမခံ ၆ လပေးမည် ဖြစ်ပြီး တစ်သိန်းအောက်စက်အားလုံးကိုတော့ အာမခံ ၁ လပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ လက်ကားပြန်လည်ရောင်းချလိုသူများအတွက်လဲ ၅ လုံးမှစတင်ပြီး အထူးနှုန်းထားများဖြင့် ရယူနိုင်ကြပါပြီခင်ဗျ။ တစ်လုံးချင်းစီရဲ့ ဈေးနှုန်း၊ Specification နှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အောက်တွင်ကြည့်နိုင်ပါသည်။ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ TX3 Mini 2GB+16GB :Dual WiFi with Bluettoth ♦️55,000 ကျပ်♦️ (Android 8.1, S905W
Grab this Limited Time Insane Special of our Comet Pack which comes with: EPSON EH-TW9400B 4K ENHANCED, HDR Projector with3Year Warranty Paradigm Monitor SE 6000F Floor Standing Speakers (Pair) Paradigm Monitor SE 2000C Centre Paradigm Classic Surround One (Pair) Paradigm Defiance V12 12" Subwoofer Paradigm H65R IN Ceiling Speakers (Pair) Yamaha Aventage RXA-780 7.2 AV Receiver Screen Technics 3M Screen Australian Made Includes projector mount, 100M speaker wire, 10M 4K HDMI cable, 2X 2M HDMI cable FREE DELIVERY. LIMITED STOCK. STRICTLY LIMITED TIME ONLY. Enquire now!
Yamaha RX-V485 je 5.1-kanalni AV prijemnik koji ima mogućnost MusicCast ozvučenja za audio uživanje u svakoj sobi! Uz 5-kanalni snažan surround zvuk, Bluetooth® za bežični streaming glazbe, HDMI® s punom podrškom za 4K Ultra HD možeš u potpunosti uživati u visokoj video kvaliteti od 4K, bez degradacije.
Don’t miss out on great deals at Makro. Shop now and get your non-essentials delivered after the lockdown period.
Style Laser Audio Your One Stop AV Online Store, Marantz, Denon, Onkyo,Yamaha, Klipsch, Monitor Audio, Cyrus, Focal, NAD, Home Theater Hi Fi Karaoke System, Projector, Sub Woofer, Power Amplifier, FREE SHIPPING WITHIN WEST MALAYSIA
7-CH AMPLIFIER WITH LATEST HOME CINEMA SPECS Denon AVR-X1600H 7.2Ch Atmos Network AV Receiver Rm2999 Pioneer XW-BTS5 Bluetooth Speaker ( Special Offer At Rm2699 Till 28/4/2020 ) Upgrade your home theater with the Denon AVR-X1600H. With 80W per channel (8 ohms, 20Hz-20kHz, .08%,2ch driven), this performance-tuned Denon AV receiver providesatruly immersive 3D audio experience. Supports Dolby Atmos®, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X™ and DTS Virtual:X. Watch your TV or projector video content with the best possible picture thanks to the latest 4K video technologies like Dolby Vision™, HDR10 and HLG. ☎03-91003023 010-3333363 FREE Shipping Peninsular Malaysia Fast Shipping We Accept Trade In ✅ Your 1 Stop AV Online Store Credit Card 0️⃣% Easy Payment Plan Up To 1️⃣2️⃣Months Please Click Picture Below To LEARN MORE ! ⬇⬇⬇
PREPUSTI SE DOBROM ZVUKU Pridruži se Facebook online izazovu i osvoji YAMAHA HTR-2071 višekanalni receiver za kućno kino vrijedan 2.390,00 kn! PRIJAVA NA ➡️ https://tooloud.co/prihvati-online-izazov-prepusti-se-dobrom-zvuku/ Ako volite gledati filmove i koncerte iz svog naslonjača i pritom uz vrhunsku kvalitetu slike uživati u istom takvom zvuku, onda je ovo prava stvar za vas – 5.1-kanalni AV receiver s tradicionalnom Yamaha kvalitetom zvuka i brojnim prikladnim značajkama. Pa čak i da nemate više zvučnika za kućno kino, receiver će poslužiti i kao pojačalo u klasičnoj stereo konfiguraciji. Nagradu osigurale NOVE BOJE ZVUKA.
NEWS Onkyo พร้อมขาย AVR และ Network AVR รุ่นใหม่สามรุ่นพร้อมกัน สนองตอบได้ครบทุกความต้องการ ***************** นี่คือข้อดีของเทคโนโลยีดิจิตัล ซึ่งทำให้คุณได้ประสิทธิภาพของภาพและเสียงที่ดีขึ้น ด้วยระดับราคาที่ลดลงสวนทางกันในแต่ละปี . ถึงเวลาอัพเกรดคุณภาพเสียงและการใช้งานกันแล้ว สำหรับคนที่ยังคงใช้ชุดโฮมเธียเตอร์ 5.1 Ch ด้วยการเลือก AV Receiver หรือ Network AV Receiver รุ่นใหม่ตัวใดตัวหนึ่งในจำนวน3ตัวที่ Onkyo นำเสนอ.. . เลือกตัวไหนดี.? ตัวไหนจะเหมาะกับคุณ.? คลิ๊กอ่านรายละเอียดของแต่ละรุ่นอย่างคร่าวๆ ได้เลยที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้!!! -------------------------- ลิ้งค์ | http://bit.ly/2SjpHhG TX-SR393 ราคา 19,900 บาท TX-SR494 ราคา 24,900 บาท TX-NR696 ราคา 32,900 บาท
Sams Club Aruba
Christmas Gift Ideas... DVD Multimedia AV Receiver with 6.2" WVGA Touchscreen Display, Built-in Bluetooth, and Direct Control for Certain Android Phones Playback from USB Device